Waxaa la aasaasay 1999ï¼ŒFitdance warshad baleedka kaas oo ku takhasusay indho la'aan, soo saar iyo iibinta dharka qoob ka ciyaarka, wuxuuna sumcad sare ku leeyahay warshadaha juear ee Chinesedance. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarno waxaa ka mid ah tuute-baleedka, goonnada baleedka, leotard qoob-ka-ciyaarka iyo dhar kale. Iyo kabaha baleedka, kabaha baleedka iyo guuleysiga. Waxyaabaha our waxaa loo dhoofiyaa dalal badan iyo gobollo sida asoverseas North America, Russia, Australia, Canada, Japan, South Korea, iwm oo si wanaagsan u soo dhoweeyeen macaamiisha guriga iyo dibadda.Weare a soo saaraha dharka qoob ka ciyaarka xirfad leh. Waxaan bixinaynay adeegyo horay loo sii qorsheeyay tan iyo markii la aasaasay shirkadda. Waxaan leenahay koox xirfadle ah oo in ka badan 20 sano oo khibrad ah u leh naqshadeynta, soo saarista iyo suuq geynta. Waxaan soo dhawaynaynaa shaybaarka in laga dhigo.